Raw Fasoracetam ntụ ntụ (110958-19-5) Ndị na-emepụta - Phcoker
Burkinaracetam uzuzu bu ihe nkpuru ohuru nke na-achoputa ya dika ọgwụgwọ ADHD. …… ..
Fasoracetam Powder bụ ihe na-adịghị na ya na ezinụlọ racetam nke nootropics. Racetams gụnyere nnukwu ìgwè nke dị iche iche ogige, niile gbanwere site na nne na nna Piracetam, nke chọpụtara na 1960s
A na-emepụta ya ugbu a dịka ọgwụgwọ ADHD na-adịghị na-akpali akpali. Ọmụmụ ihe ụmụ mmadụ na-ahụ anya na fasoracetam dị oke ma dị mma, na-egosi na ọ nwere ike ịme otu ụdị ADHD dịka nwata. Ihe omumu na ihe omuma nke ndi ozo na egosi na o nwere ike ime ka ncheta di elu, mezie ura, kwusi nchegbu na obi nkoropu, ma belata ihe mgbaàmà nke iwepu ya na ogwu ozo.
Kedu ka Fasoracetam si eme ntụ ntụ (110958-19-5) -arụ ọrụ?
Enweghi ihe akaebe zuru oke banyere uzo fasoracetam na-aru oru iji meziwanye cognition, ma, a kwenyere na iji dochie mmepụta na ịhapụ glutamate, GABA, na acetylcholine, atọ n'ime ụbụrụ kachasị mkpa nke ụbụrụ.
Usoro iwu nke GABA (B) nke a tụlere na uru bụ usoro ọzọ nke nrụrụ antidepressant na uru ndị metụtara nchegbu, ma ọ dị mkpa ịmatakwu ihe ọmụma iji ghọta n'ụzọ zuru ezu otú arụ ọrụ ndị metụtara ọrụ nchekwa na ihe mkpali
uru of Fasoracetam ntụ ntụ (110958-19-5)
Nwere ike ime ka ncheta kachasị mma na Cognition
Nwere ike iwepụ nchegbu na ịda mbà n'obi
Ọdịdị ADHD Ọgwụ
Enwere ike ịkwụsị ịṅụ ọgwụ ọjọọ
-atụ aro Fasoracetam ntụ ntụ (110958-19-5) Ọgwụgwọ
Enweghi usoro ọgwụgwọ nke fasoracetam maka umu mmadu. Ihe omuma nke anecdot na-atụ aro ka ọ dịkwuo obere nhazi gburugburu 10 - 15 mg na nnukwu doses na 30 - 50 mg kwa na-eje ozi ugboro atọ kwa ụbọchị.
mmetụta of Fasoracetam ntụ ntụ (110958-19-5)
Burkinaracetam ntụ ntụ yiri ka ọ dị mma ma kwadoro nke ọma mgbe ndị mmadụ nwere ahụ ike na-ewere ya.
Ihe ndị a na-akọkarị dịka ndị ọzọ nootropics na ezinụlọ racetam: ike ọgwụgwụ na transitory ike, nkwarụ nri, na isi ọwụwa.
Otú ọ dị, ụfọdụ ndị ọrụ na-akọ na libido belata ma belata orgasms mgbe ha na-ewere fasoracetam ntụ ntụ
Enweghị ihe ọmụma dị na mmekọrịta dị n'etiti fasoracetam na ọgwụ ndị ọzọ, mana ọ nwere ike ịmepụta ihe ọ bụla.